Kulankii Baarlamaanka oo maanta qasoomay, muxuuse yahay Ajanduhu?. – Soomaali 24 Media Network
Kulankii Baarlamaanka oo maanta qasoomay, muxuuse yahay Ajanduhu?.
Posted on March 31, 2021 Leave a Comment on Kulankii Baarlamaanka oo maanta qasoomay, muxuuse yahay Ajanduhu?.
Waxaa goordhaw xarunta Golaha shacabka ay ku shiraan ka furmay shir ay leeyihiin Xildhibaanada golaha shacabka, waxaana shirkan Gudoominaya Gudoomiyaha golaha Maxamed Mursan Sheekh.
Kulanka Xildhibaanada golaha shacabka ayaana maanta waxaa horyaalay labo ajande oo kala ahaa Covid-19, meel marinta labo xubnood oo kamid noqonaya Guddiga Madaxa banaan ee xuduudaha iyadoona meesha laga saaray ajandihii U codeyn sharciga Qaxootiga Qaranka.
Mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa goordhaw ansixiyay Axmed Zeylici Muuse iyo Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Xamza oo ka mid ah Guddiga Madaxa banaan ee xuduudaha iyo Federaalka.
Kulanka oo ay joogeen 139-Xildhibaan ayaa waxaa ogolaatay in labadan xubnood lagu daro guddiga xuduudaha 136-Xildhibaan halka ay ka aamuseen 3-Xildhibaan mana jirin wax diiday in ansixinta labadan xubnood.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaana kulankooda sii wata iyagoona guda galay ajandayaasha kale ee horyaala, Gudoonka golaha shacabka ayaan ajandaha kulanka kusoo darin qodob shaki laga qabay oo ahaa mudo kororsi
← Dowladda Soomaaliya oo si beenisay hadal kasoo yeeray Cumar Cabdiraahiid Cali Sharmaarke.
Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo ku guul darraystay in ay xalliyaan khilaafka Siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan. →